मन्त्रि बाँस्कोटासँगै काठमाडौँ ओर्लिएका गायक प्रमोदले अचम्मि’त हुदै लेखे यस्तो स्टाटस!! हेर्नुहोस्
February 20, 2020 12623
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राजिना’मा दिएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसनका बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरि’एसँगै बास्कोटाले राजिनामा दिएका हुन् ।
मन्त्री बास्कोटाले राजिनामा दिएलगतै उनिसंगै धनगढी विमानस्थलबाट एउटै विमानमा काठमाडौँ आएका चर्चित गायक प्रमोद खरेलले एक स्टाटस लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ”सँगै एउटै विमानबाट वल्लो पल्लो सिट धनगढी बाट काठमाडौँ आइयो। म कोटेश्वर पुग्दैछु। उहाले राजिनामा ठो-किसक्नु भएछ। कति फास्ट हौ जे मा पनि !”
गायक प्रमोद र मन्त्री बाँस्कोटा विमानबाट त्रिभुवन विमा’नस्थलमा एकसाथ बाहिरिएका थिए। तर गायक प्रमोद साधारण व्यक्ति आउने मार्गबाट बाहिरिए भने मन्त्रि बाँस्कोटा भीआईपी मार्गबाट बाहिरिएका थिए । प्रमोद विमानस्थलबाट कोटेश्वर नपुग्दै एकसाथ त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका मन्त्रि बास्कोटाले राजिनामा दिएको खबर सुनेपछि अचम्मित हुदै स्टाटस लेखेका थिए।
सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो बिहिबार बिहान सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएसँगै बास्कोटाले दिउँसो राजिनामा दिएका हुन्।
बाँस्कोटाले आफ्ना बारेमा प्रश्न उठेको जनाउँदै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। सेक्युरि’टी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रक्रि’यामा कमिशनका लागि कुराकानी भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै ट्वीट गरी मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्।
उनले ट्वीटमा भनेका छन्, “मेरो बारेमा प्रश्न उठेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ” ।
Prevसन्तोष दाई विदेश गए’पछि श्रीमती मिडि’यामा,छोराछोरी भेटेप’छि चल्यो रुवा’बासी ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextमहाशिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
वि’ष खुवाएर मारिए`को कुकुर खाएर ६७ ओटा गिद्ध मरे….
आज डलर सहित अन्य मुलुकको मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ: हेर्नु`होस्